Mayelana NATHI - HHO FACTORY, Ltd
IHHO FACTORY, Ltd - Ireland European Union 24/7/2018
Umkhiqizi Omusha Wama-HHO Kit HHO X-CELL Generator Plug-N-Go All-In-One Kits ku-Petrol, izinjini zika-Diesel ukunciphisa ukukhishwa. Ukucwaninga nokuthuthukiswa kwesisombululo esisebenzayo se-hydrogen phakathi kwezicelo ezisindayo.
Sigxile ekuletheni ama-Carbon Emission Reduction Technologies ezimakethe zomhlaba. I-Active HHO Engine Carbon Cleaning kufika ku-90%, Buyisela ukusetshenziswa kwephethiloli, Buyisela amandla nokusebenza. I-All-In-One Plug-N-Go Ukulungele ukusebenza kahle emotweni, iloli ngaphandle kosizo lomakhenikha.
Inhloso yethu enkulu ukuhola i-Hydrogen Fuel Movement futhi sifundise umhlaba ngezindlela ezibalulekile zokusebenzisa uphethiloli obizayo futhi oyingozi ngenkathi sinikeza amathuba amabhizinisi enza inzuzo.
Sithuthukise i-HHO Kit HHO X-CELL HHO Generator entsha ye-Plug-N-Play Oxy-Hydrogen Kit, esebenziseka kalula futhi elungele ukuhlangana ngaphandle kwesidingo sokufakwa kwe-HHO, asikho isidingo se-PWM, asikho isidingo sedivayisi yokukopela ye-ECU EFIE kuwo wonke amanje nezimoto zakudala ngezinyathelo ezi-3 nemizuzu embalwa ngaphansi kwe-hood!
Sinokuhlangenwe nakho okubalulekile iminyaka eminingi ngokufakwa kwe-HHO okuyinkimbinkimbi kwama-generator e-Hho Dry-Cell adinga amahora ama-4-8 ukufakwa kobungcweti nomhlangano oyinkimbinkimbi ngosizo oludingekayo lomakhenikha lapha e-Ireland.
Inguquko entsha ye-All-In-One Plug-N-Play tine Hydrogen kit enedizayini eyakhiwe e-Ireland yi-HHO FACTORY, Ltd ngamazinga wobuchwepheshe kanye nokukhiqizwa kwezimboni.
IQINISO LABO, Ltd
2 Igquma lomlilo,
Ukuthengwa kwe-Intanethi kwe-Intanethi 365
Ukudilizwa: Mon - Fri, 10am - 6pm,
ukufakwa: Sat, 2 pm - 6 pm,
Shayela: +353 833 111 644,
I-VAT ID IE: 3556217IH,